အမေးအဖြေများ - အစိမ်းရောင်စခန်းကုန်ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ
တဲထည်၏မည်မျှရေကော်လံမှဆက်စပ်မသာရေစိုခံသည်ဖြစ်စေ, အရေးအပါဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောအသံပေမယ့်ဈေးကွက်တွင်ရွက်ဖျင်တဲအများကြီးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ဖြစ်ပြီး, ပင်ရေကော်လံ 5000mm ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အချိန်မရွေးမုနျတိုငျးမှအလင်းမိုဃ်းကိုရွာစေရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်စေရသောမိုးလုံလေလုံမိုဃ်းကိုရွာစေစမ်းသပ်ကိရိယာများ, များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကပြီးပြည့်စုံရေစိုခံတဲကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုသေချာစေရန်တစ်စုံတစ်ရာပေါက်ကြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏ရေစိုခံတတဲပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောဒါပေမယ့်လည်းဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရာအပေါ်မူတည်နေသည်မသာပါ။ သငျသညျအမိန့်နေရာမီ, သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်ကအကြောင်းသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမေးဖို့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေကိုရချင်ပါတယ်။
ဒုတိယအ, သင်သည်သင်၏တဲကိုရေစိုခံစေရန်အစုတခုအဖြစ်သင်၏တဲအတူတစ်ဦးရွက်ဖျင်ရှိနိုင်ပါသည်။ အတူတကွသင်၏တဲနဲ့ညွှန်ကြားချက်ရှိသည်ဖို့သတိရပေးပါ။
ထို့ကြောင့် ISO5912 ရန်, ရွက်ဖျင်တဲ2အမျိုးအစားရှိပါတယ်။ ပိုပြီး 2.5kgs ထက် 2.5kg, လူတစ်ဦးနှုန်းစုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူ category B ကိုထက်မပိုလူတစ်ဦးနှုန်းစုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူ category တစ်ဦး။ Category: B ကိုအဘို့, လူတစ်ဦးချင်းစီက x 60cm 200 ထက်မနည်းအိပ်ပျော်ခြင်းဧရိယာရှိသင့်ပါတယ်။ 195cm ထက်အမျိုးအစားတစ်ဦးအဘို့, စုစုပေါင်းအရှည်မနည်းသင့်တယ်, ပခုံးမှာအကျယ် 35cm ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ဦးခေါင်း & ခွကေိုအနေအထားမှာ 58cm ထက်မနည်းသင့်ပါတယ်။ သင်ကမှတ်မိဖို့အတှကျအခကျခဲင် အကယ်. ရုံလူတစ်ဦးချင်းစီက x 60cm 200 ထက်မနည်းအိပ်ပျော်ခြင်းဧရိယာရှိသင့်ကြောင်းစိတ်တွင်ရှိသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းလေဝင်လေထွက်လုံလောက်လျှင်။ ISO5912 ကြောင့် ပတ်သက်. အခြေစိုက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်တဲကိုကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်၏အပူချိန်နှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမည်။
တတိယကရေစိုခံကိုတောင်းဆိုဖို့မဒီဇိုင်း မှလွဲ. တဲတော်ရေစိုခံဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ။ ဒါကအခြေခံလိုအပ်ချက်ပေမယ်ရွက်ဖျင်တဲတွေအများကြီးကဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်။
ဘွား, ခိုင်ခံ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံဘောင်။
ပဉ္စမ, ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းဖြစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါသင့်တယ်။ သင်သည်မည်သည့်လိုအပ်ချက်ရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါအခမဲ့ခံစားရသည်။
footprint ထိုကဲ့သို့သောကမ်းခြေကျောက်ရှယ်ယာအဖြစ်ချွန်ထက်တ္ထုကနေသင့်ရဲ့တဲကိုကြမ်းပြင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မပေးတဲလုံးကိုတစ်ဦးခြေရာကိုလိုအပ်ပါတယ်။
တဲအောက်ခြေရာကိုထားသောအခါ, မိုးရွာသောအခါရေခြေရာပေါ် get နှင့်သင့်တဲကိုအောက်မှာ run နှင့်တဲကြမ်းပြင်စိမ်နိုငျသောကွောငျ့သငျသညျ, သင့်တဲထဲကအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသေချာပါစေ။
သင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်၏အပ်ချုပ်ဆောက်လုပ်ရေးကဘာလဲ? သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်မထိုက်မတန်ကောင်းသလော သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆောက်လုပ်ရေး၏အင်္ဂါရပ်အတှကျအသုံးပွုသောဆောက်လုပ်ရေးပြောပါသလား ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးကွက်အပေါ်2ကွဲပြားခြားနားတည်ဆောက်မှုများ, အဆိုပါ H ကိုအခန်းထဲကနှင့်နှစ်ဆ H ကိုအခန်းထဲကရှိပါတယ်။
အဆိုပါ H ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်း အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်, အတူတကွတိုက်ရိုက် shell ကို, insulator တွင်လည်းနှင့်နံရံချုပ်။ ဤသည်ဆောက်လုပ်ရေးများသောအားဖြင့်နွေရာသီ-နွေဦးမော်ဒယ်များအသုံးပြုသည်
နှစ်ချက် H ကိုအခန်းထဲက , အနိမ့်အပူချိန်အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်အတှကျအသုံးပွုလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်၏။2သီးခြားအလွှာပြင်အလွှာချုပ် shell ကို & insulator တွင်လည်းတဦးအလွှာအတူတကွနှင့်အတွင်းပိုင်းအလွှာချုပ်နံရံနှင့်လျှပ်ကာနောက်ထပ်အလွှာပြီးရင်အတူတူ2အလွှာချုပ်အတူတကွရှိပါတယ်။ ဤသည်ကို double H ကိုဆောက်လုပ်ရေးပူနွေးအိတ်အိပ်ပျော်နေသောထားရန် H ကိုအခန်းထဲကထက်ပို insulator တွင်လည်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်မှုများနိုင်ဘူး။ "အပူ Dummy" နဲ့အပူလျှပ်ကာစမ်းသပ်အများကြီးပြီးနောက်ကြှနျုပျတို့သညျ "အေး Points" ရှိသေးရဲ့တှေ့ရှိ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့တိုးတက်လာသောနှစ်ဆ H ကိုဆောက်လုပ်ရေးသက်ဆိုင်ပါသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏အိပ်အိတ်ရေစိုခံကြောင်းသင်ပြောပြနေလျှင်သူ / သူမဒီမျဉ်းထဲမှာပါလျှင်, သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အိတ် Sleeping သငျ့သညျ မဟု ရေစိုခံ, ကရေတွန်းလှန်နှင့် breathable ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်အိပ်အိတ်ရေစိုခံသည်မှန်လျှင်, က breathable မဟုတ်သီးသန့်အချို့အလွန်အမင်းမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုထည်မည်။ စားသုံးသူချွေးအလွန်မသက်မသာခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
ဇစ်အရည်အသွေးနှင့်အိပ်အိတ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအိတ်အိပ်ပျော်နေသောအပေါ်ဇစ်စွမ်းဆောင်ရည်။ ကျနော်တို့အလွန်အရည်အသွေးကောင်းနဲ့ဇစ်ရှိပေမယ်သာသေချာတာကတော့ YKK ဇစ်၏ 30-40% ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏ဇစ်သည်ကောင်းကိုသာသူ့ဟာသူဇစ်ကိုစမ်းသပ်ကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးသောသင်ကိုပြောပြလျှင်သင်ပိုကောင်းအိတ်အိပ်ပျော်နေသောအပေါ်ဇစ်စမ်းသပ်ချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့စက်ရေချိုးနိုင်သောပျော်ပွဲစားစောင်များရှိသော်လည်း, အားလုံးပျော်ပွဲစားစောင်ရေချိုးနိုင်သော mashing ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အသေးစိတျကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျနော်တို့စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်မည်ဖြစ်ပြီးအားလုံးချောထုတ်ကုန်တင်ပို့မတိုင်မီတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခံရလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကိုမဆို default အနေနဲ့အပိုင်းအစရှိပါတယ်လျှင်စစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်သင့်ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခံရစေလျှင်သင်သိနိုငျသညျ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ 100% စံနှင့်ကိုက်ညီသောမဖြစ်နိုင်ပါပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်, အသေးစိတ်ကိုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစစျဆေးပါ။ သင်တို့သည်လည်းပြီးတော့ကျနော်တို့အညီသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်စျေးကွက်သိစေနိုင်ပါတယ်။
နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ပေါ်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 500pcs ထံမှ 2000pcs မှအချို့ပစ္စည်းများကိုပိုမိုတချို့လျော့နည်း။ တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ development team ရှိသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နမူနာအဘို့, ခဲအချိန်အကြောင်းကို7ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအဘို့, ခဲအချိန် 45-60 ရက်အတွင်းသိုက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ (1) ငါတို့သည်သင်တို့၏သိုက်ကိုလက်ခံရရှိကြနှင့် (2) ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အဘို့သင့်ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်များလာသောအခါဦးဆောင်အချိန်ထိရောက်သော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲအဆသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်အတူသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကူးပါ။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုနှင့်ငွေပေးချေမှု tool ကိုကဘာလဲ?
ငွေပေးချေမှုရမည့်သက်တမ်း: ကြိုတင်မဲအတွက် 30% သိုက်, 10 ရက်နှင့်အတူ B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 70% ဟန်ချက်။
ငွေပေးချေမှုရမည့် tool ကို: TT, L ကို A / C, အနောကျပိုငျးပြည်ထောင်စု & Paypal ။
အဆိုပါသင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်ကုန်ပစ္စည်းများရဖို့ရွေးချယ်နည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Express ကိုအမြန်ဆုံးဒါပေမယ့်လည်းစျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်နားမှာကကြီးမားသော volume အတှကျအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။ တခါတရံမှာ, ရထားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အတိအကျကုန်တင်နှုန်းထားများကျနော်တို့အသံအတိုးအကျယ်, အလေးချိန်နဲ့သင်္ဘောနည်းလမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိကြမှသာလျှင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ပါ။